Ubaba kaMenzi Ngubane ushone ngaphambi nje kwesikhumbuzo sendodana yakhe | Scrolla Izindaba
Ubaba kaMenzi Ngubane ushone ngaphambi nje kwesikhumbuzo sendodana yakhe
AbakwaNgubane bebesakhala ngokushona kukaMenzi Ngubane oshone ngempelasonto ngesikhathi behlaselwa enye inhlekelele.
NgoLwesibili, kushone ubaba kaMenzi.
Imithombo esondelene nomndeni ithe kusolwa ukuthi ushone ngesifo senhliziyo ngemuva kokushona kwendodana yakhe.
UMenzi wenza idili likababa wakhe lokugubha iminyaka engama-90 ngonyaka owedlule.
Ukushona kukababa walo mlingisi kwenzeke nje ngesikhathi umndeni ubumatasa ulungiselela isikhumbuzo sikaMenzi esizoba ngoLwesine.
Umthombo osondelene nomndeni utshele i-Sunday World ukuthi ubaba kaMenzi udlule emhlabeni ekwakhe eMnambithi lapho okuhlelwe ukuthi uMenzi afihlwe khona kulo Mgqibelo.
I-Sunday World iphinde yabika ukuthi imithombo esondelene nomndeni iyasola ukuthi ubulawe yinhliziyo ebuhlungu ngoba laba ababili bebesondelene kakhulu.
“Uphukile ngokushona kwendodana yakhe … sisola ukuthi ukuhluleka kwenhliziyo,” kusho umthombo.
“Babehlela isikhumbuzo sikaMenzi ngalolu Lwesine oluzayo kodwa akakwazanga ukubekezelela ubuhlungu bokulahlekelwa yindodana yakhe.”